avril 2020 · Page 2 de 2 · déliremadagascar
Socio-eco	 8 avril 2020 R Nirina
KAOMININA AMPITATAFIKA: “Misy loko politika ny fizarana ireo fanampiana avy amin’ny fanjakana”
Kandida tsy lany no mizara ny vary mora. Voatery nofoanana ny fizarana vary mora teny amin’ny kaominina Ampitatafika ny sabotsy 04 Aprily 2020 teo Continuer la lecture →
Socio-eco	 6 avril 2020 R Nirina
KAOMININA ANDRANONAHOATRA: Beantitra 400 isa hisitraka fanampiana avy amin’ny fanjakana
Eo am-pandaminana. Efa ao amin’ny kaominina Andranonahoatra ny fanampiana ho an’ny beantitra avy amin’ny fitondram-panjakana ho fiatrehana ny Coronavirus. Continuer la lecture →
KAOMININA AMBOHIDRAPETO: Hizara fanampiana ho an’ireo sahirana hiatrehana ny fihibohana
Miantso ireo “vato nasondrotry ny tany”. Mahatsapa ny ben’ny tanàn’ Ambohidrapeto, Andriatsilavo Mihary fa misedra fahasahiranana ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ny kaominina izay tantaniny manoloana ny fiatrehana ny Coronavirus. Continuer la lecture →